मे 1 मा छुट्टी को शुरू भएको उहाँले आए लामो अघि हामीलाई उज्ज्वल रंगीन र हँसिलो क्षणमा को सम्झनाहरु संग, बाल्यकाल देखि सुरु प्रसन्न गर्न। घर मा र काममा यो र वयस्कहरूको लागि तयार। सिक्न कविता, गीत र नृत्य - यसको लागि बच्चाहरु तयार छन्। घरहरू र संस्थाहरु, सडकमा, पार्क को FACADES सजाउनु, फूल व्यवस्था अग्रिम गरियो तिनीहरूलाई हरियो पात पलायो र त्यसपछि एक सुन्दर, विद्यालय वा किंडरगार्टन फूल बनेको हात उसलाई गाँसिएको पानी मा sprigs राखिएको थियो।
सबै आनन्द, वसन्त स्नेह, र प्रकृति नै अदनको बगैचा को reminiscent वरिपरि भरिएको थियो -, blooming स्याउ र चेरी lawns र roadside verges यसको intoxicating सुगन्ध बकाइन उत्सर्जित तिनीहरू उज्ज्वल घाम डेन्डेलिओन टाउको निस्कने दिनुभयो।
यो बाल सदन हाम्रो बच्चाहरु तिनीहरूलाई विजार्डहरू एक चमत्कार सिर्जना गर्न आफ्नो हात कसरी बनाउने चिन्ने बनाउन सक्छ आधुनिक जीवन मा एक सक्रिय र अविस्मरणीय वातावरण बनाउन। र यो लागि एक छुट्टी परिदृश्य वसन्त मई 1 बनाउन आवश्यक छ।
लिपि वसन्त चाडमा को तयारी र मस्यौदा
का तमाम योजना को प्रस्तुति सुरु गरौँ।
लिपि आमाबाबुले यो बिन्दु छलफल भएको मात्र छैन थिएटर प्रदर्शन, संगीत, साहित्यिक-सांगीतिक संरचना, तर पनि परिसर को तैयारी, छोराछोरीको संस्थाहरु को सजावट, र जहाँ बच्चाहरु बाँच्न घर को पनि मोहरा समावेश गर्नुपर्छ। साथै पकाउने गहने, स्मृति चिन्ह, उपहार रूपमा। त्यसपछि यी उपहार वा दिन यस्तो तरिकाले विकास गर्न सकिन्छ गतिविधि, , छोराछोरीको घरमा अनाथ या त एक्लै वा वृद्ध क्यान्सर विरामीहरु।
अग्रिम, दुई वा तीन हप्तासम्म, त्यहाँ घर मा बच्चाहरु एउटा सन्दर्भ थियो। आफ्नो सक्षमता र क्षमता - को पाठ्यक्रम, तिनीहरूले आमाबाबुले सहमत गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले मध्य समूह मा वसन्त चाडमा को आगामी अवधि मा सक्रिय सहभागिता प्रेरित गर्ने प्रयास गर्न आवश्यक छ।
लिपि सारा बातचीत गर्न सक्छन्, तर केवल ती क्षण मा उनि आफ्नो बच्चा संग भाग गर्न सक्छन्, तर एक विचार अब तिनीहरूलाई चासो हुन सक्छ।
लिपि को मुख्य भाग को तयारी
एक सूट, हस्तशिल्प लागि खाली तयार को संभावना छलफल गर्न, साहित्यिक रचनाहरूको शब्दहरू गीतहरू, skits, फ्लैश भीड मा आफ्नो भाग भन्दा कुरा बच्चा संग तयार हुनुहोस्। यो सबै प्रिपेरेटरी काम प्रत्येक अभिभावक र बच्चा संग बाहिर छ। यसरी, बच्चाहरु र वसन्त महोत्सव गर्न समर्पित छ जो कमनवेल्थ, त्यहाँ छ।
लिपि संकलित र यस्तो प्रशिक्षण र शिक्षकहरूलाई, सीधा आमाबाबु र छोराछोरी आफूलाई बस अनुकूल टोलीको फरक हुनेछ।
आमाबाबुले संग संचार विशेष ध्यान
आमाबाबुले संग संचार छुट्टी लागि तयारी मा एक विशेष स्थान छ। तिनीहरूले कसरी सजाया गरिनेछ अपार्टमेन्ट, घर, बच्चा कोठा निर्णय वेशभूषा, एक परिवार रूपमा दिन को योजना छलफल गर्न बच्चाहरु संग सँगै तयार गर्न आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूले एक लिपि र एक छुट्टी घर बनाउन सक्नुहुन्छ - यो कन्सर्ट पछि वा उसलाई अगाडि खाने को लागि बधाई - साथै अतिथि, मित्र आमन्त्रित को संभावना।
यो सबै बच्चा यो दिन साँच्चै धेरै महत्वपूर्ण छ कि भावना दिनेछु। पालो मा, बाल सदन मा, वसन्त र श्रम को छुट्टी को लिपि को तयारी मा, बच्चा क्यालेन्डरमा दिन ज्योति को उद्भव को कहानी बताउन र यसलाई हाम्रो मान्छे त मूल्यवान छ किन।
घटनाको तयारीमा सहभागिता बच्चा यो ज्ञान सुनिश्चिता दिन छ, र आनन्द को आफ्नो जागरूकता को समयमा वास्तवमा, सबै कुरा समर्पित छ जो, मान्छे, को एकता को एक अर्थमा देखि उत्पन्न हुन्छ।
बाल सदन मा वसन्त चाडमा कसरी योजना
लिपि, छोराछोरीको रचनात्मकता को कार्यान्वयन रूपमा दिइनेछ गर्न रचनात्मक क्षमता र समूहमा बच्चाहरु को झुकाव आवश्यक हुन सक्छ। वा विपरित, छोराछोरी संग आफ्नो क्षमता अनुकूलता प्रकट र बच्चाहरु को एक समूह बीच यसको प्रदर्शन को कार्यान्वयन वितरण गर्न एक लिपि लेख्न।
माथि वसन्त छुट्टी परिदृश्य को चित्रकला अनुभव र सीप आफ्नो प्रयोग गरेर आफूलाई द्वारा या त पूरा गर्न सकिन्छ, वा तयार बनाएको ढाँचाहरू र सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
हामी गेट मा पूरा!
निस्सन्देह, छुट्टी परिदृश्य वसन्त कि तयार आफ्नो योजना को लागि पूर्ण उपयुक्त हुन सक्दैन। साथै, यो सबै predpodgotovitelny अवधि गुमाएको छ। तसर्थ, त्यहाँ समूहमा बच्चा को आगमन को पहिलो मिनेट देखि वसन्त महोत्सव को लिपि को संस्करण प्रदान गरिएको छ। यसलाई यो दिन, मात्र होइन एक समूह तर सम्पूर्ण किंडरगार्टन कर्मचारी बच्चाहरु र वयस्क लागि छुट्टी पाहुना तयार हुन सजाने को बार, ढोका, स्थापना को विन्डो र भित्री, प्रत्येक आगमन उत्साहित स्थिति पैदा हुनेछ जो हुनेछ सम्भव छ।
यो दिन मा, तपाईं कहाँ बच्चाहरु माथि सबै सँगै लुगा हल, मा समूह मा एक उपयुक्त आनन्दित संगीत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बच्चाहरु प्रेम बेलुन, तपाईँ तिनीहरूलाई कट्टर समूह प्रविष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, वा जहाँ सबै चाडहरूमा आयोजित गर्दै हल प्रवेश गर्न दिइएको। तिनीहरूले विभिन्न चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको र रचनाहरूको हुन सक्छ किनभने, विभिन्न आकार र रंग प्रयोग बलमा।
खाने अघि उत्सव पैदल
नास्ता गरिसकेपछि, छोराछोरीलाई जहाँ तपाईं वयस्क संग मजा खेल संगठित गर्न एक पैदल, नेतृत्व गर्नेछन् - एक उज्ज्वल काम वर्ण रूपमा शैली कुदाल राख्नु केन्द्र मा उदाहरणका लागि, र विभिन्न रंग को उनको लामो रिबन संलग्न र त कर्मचारी प्राप्त गर्न उनको वरिपरि केही क्रममा स्पिन सुन्दर ढाँचा।
प्रत्येक छुट्टी पार्टी, उदाहरणका लागि, सुन्दर रिबन रूपमा टिप संलग्न एउटा सानो छडी दिन सक्छ। बच्चाहरु शायद हावा स्मारिका उड्दै को मूड उठाउनु हुनेछ। यी लाठी केटाहरु आफूलाई बनाउन सक्छ। एक केटी गृहकार्य कागज वा अन्य रंग को सुन्दर माला तयार गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि सङ्कलन र wildflowers भने। पक्कै यी माला प्रकृति र यसको उपहार संग सम्पर्क बाट बच्चाहरु ठूलो प्रेरणा गर्नेछ।
हामी छुट्टी तालिका सुन्दर राखे मा बस्न
राम्रो तयार भएकाहरूलाई आमा, सुन्दर स्वादिष्ट आटा मूर्तिहरु को आनन्दित दिनको लागि Bake आफ्नो बच्चाहरु संग हुन सक्छ। र बाँकी, वयस्क संग खाने को लागि एक उत्सव तालिका सेटिङ भाग गर्न सक्नुहुन्छ। अग्रिम यो सानो उपहार को रूप मा गृहकार्य व्यक्तिगत उपहार मा तयार गर्न सकिन्छ: एक सुन्दर नैपकिन र आफ्ना छोराछोरीको रेखाचित्र, बधाई छ, वा सानो फूल, जो तपाईं smartly तालिका सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ, आदि मा र्याप ...
जलपान पछि, तपाईं कन्सर्ट परिदृश्य, जहाँ छोराछोरी, गाउनेछु कविता, नृत्य कविता भन्नु र नृत्य नेतृत्व को मुख्य भाग खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
र बाल सदन घर हिड्ने छुट्टी, को अन्त पछि, तपाईं आफ्नो हजुरबा हजुरआमाले, तिनीहरूलाई वसन्त उपहार बनाउन र त्यो दिन आफ्ना कथाहरू सुन्न भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। घर आइपुगेपछि, बच्चा छुट्टी बारेमा तपाईंको प्रतिक्रिया साझेदारी गर्न निश्चित हुनुपर्दछ, र राम्रो हुनेछ, त्यसैले त्यो दिन को सबै भन्दा सुन्दर अनुभव चित्रित।
केही दिन यो गर्भवती प्राप्त गर्न राम्रो छ।
शिशुहरू मा Fontanelle
दुर्लभ केटाहरू नाम। बालक लागि दुर्लभ रूसी नाम
मैले5महिनामा बच्चालाई के गर्न सक्छु? बच्चाहरु को लागि सब्जी र फल puree
"वसन्त" मा वरिष्ठ समूहमा मोडलिङ। sculpting लागि सेट
बालिका कसरी पुरानो महिनावारी सामान्य सुरु?
आत्मविश्वास विकास गर्न कसरी एक सरल तरिका
रेस्टुरेन्ट "Tinatin"। रेस्टुरेन्ट "Tinatin", मास्को - समीक्षा
को भित्री परिसर मा जापानी शैली
Rik Riordan "PERCY ज्याक्सन" आदेश मा पुस्तकहरू
Lefgrena सिंड्रोम: कारणहरू, नैदानिक सुविधाहरू, उपचार, रोकथाम